nepse | Ratopati
३८ अंकको करेक्सनपछि नेप्सेमा ३२ अंकको सुधार, कारोबार झन् खस्कियो access_timeमाघ ५, २०७८
बुधबारको ३८ अंकमाथिको करेक्सनपछि आज नेप्सेमा ३२ अंकको सुधार आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बिहीबार नेप्से सूचक ३२.९६ अंकले बढ्दै २९ सय ३१.२६ विन्दुमा उक्लिएको हो । गत बुधबार यस्तो सूचक अधिकतम ३८.३५ अंकले घट्दै २८ सय ९८.३१ बिन्दुमा अडिएको थियो ।...
नेप्से सूचक ३८ अंकले घटेर २८ सयमा झर्‍यो, कारोबार रकम पनि घट्यो access_timeमाघ ५, २०७८
बुधबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ३८ अंक माथिले घटेर २८ सयको रेञ्जमा झरेको छ । लामो समयसम्मको लगातारको गिरावट पछि बढेर साढे २९ सय नजिक पुगेको नेप्सेमा पुनः गिरावट आएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाअनुसार आज नेप्से ३८.३५ अंकले घट्दै २८ सय ९८.३१ विन्दुमा&...
सेयर बजार परिसूचक २९ सय अंकमाथि access_timeमाघ २, २०७८
साताको पहिलो दिन आज आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २९ सय ३९ अंकमा पुगेको छ । २८ सय ७३ अंकबाट कारोबार सुरु भएको नेप्से परिसूचक बढेर २९ सय अंक माथि पुगेको हो । यसक्रममा यो समाचार तयार पार्दासम्म परिसूचक ८१.३० अंकले बढेको छ । यस्तै, पाँच अर्ब...
नेप्से परिसूचक २६ सय अंकमा पुग्यो, कुन कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए ? access_timeपुस १९, २०७८
आज सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३२.०३ अंकले बढेको छ । १.२४ प्रतिशतले बढेसँगै नेप्से परिसूचक २६ सय १६ अंकमा पुगेर रोकिएको छ । आज नेप्सेको कारोबार २५ सय ८४ अंकबाट सुरू भएको थियो । यसक्रममा आज तीन अर्ब ७८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ९० हज...
१० कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन access_timeपुस १६, २०७८
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शुक्रबार १० कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीहरूले बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेसँगै नेप्सेले सेयर मूल्यमा पनि समायोजन गरेको हो । नेप्सेले नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी, गुडवील फाइनान्स, फरवार्ड लघु...
नेप्सेमा ५ अंकको सुधार, नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयर ९ प्रतिशत बढ्यो access_timeपुस १४, २०७८
आज बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सामान्य सुधार आएको छ । नेप्से परिसूचक आज ५.५१ अंकले बढेर बन्द भएको छ । कारोबार सुरू भएदेखि घट्न थालेको नेप्से अन्तिममा सुधारिएर बन्द भएको हो । कारोबार सुरु भएको ३० मिनेटसम्म घटेर २५ सय १३ अंकमा आइपुगेको थियो । त्यसपछि बढ...
नेप्से फेरि ६९ अंकले ओर्लियो, राताम्मे बजारमा साढे पाँच अर्बको कारोबार access_timeपुस १२, २०७८
केही दिनयताको सुधारोन्मुख सेयर बजार पुनः ओरालो लागेको छ । गत आइतबार ७१ अंक माथिले बढेको बजारमा आज सोमबार एकैदिनमा करिब ७० अंकको गिरावट आएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक ६९.७७ अंकले घटेर २५ सय २१.६५ विन्दुमा ओर्लिएको छ । यस ...
दुई लघुवित्त र एक वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य समायोजन access_timeपुस १२, २०७८
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सोमबार दुई लघुवित्त तथा एक वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । सोमबार नेप्सेले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकको आठ प्रतिशत, विजय लघुवित्तको २० दशमलव ०३ प्रतिशत र महुली लघुवित्तको २६ प्रतिशत सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो। साधारणसभ...
नेप्सेमा ७१ अंकको उछाल, के अब धितोपत्र बजार सुध्रिएकै हो त ? access_timeपुस ११, २०७८
लामो समयसम्म घट्दो क्रममा रहेको नेप्से पुन: उकालो लाग्न थालेको छ । गत हप्ताको मंगलबारदेखि उकालो लाग्ने थालेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से यस साताको पहिलो दिन अर्थात् आज आइतबार मात्र ७१ अंकमाथिले वृद्धि भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज आइतबार नेप्से सूचक ...
साताको नेप्से- सूचक १४३ अंकले बढ्यो, कारोबार रकम पनि सुधारियो access_timeपुस १०, २०७८
यो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १४३ अंकले बढेर बन्द भएको छ । साताको चार कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर बन्द भएको हो । यही साता उद्यौली/उभौली पर्व परेकाले एक दिन नेप्से बन्द थियो । गत साताको बिहीबार २३ सय ७६ अंकमा बन्द भएको थियो । जुन, ...
नेप्सेमा सुधार : साढे १२ अंकले बढेको बजारमा साढे ४ अर्बको कारोबार access_timeपुस ८, २०७८
लगातार तेस्रो दिन पनि सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार आज बिहीबार नेप्से सूचक १२.५३ अंकले बढ्दै २५ सय २०.२३ बिन्दुमा उक्लिएको हो । गत बुधबार ९२ अंक माथिले नेप्सेमा वृद्धि आएको थियो । साताको अन्तिम कारो...
मध्य भोटेकोसीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत access_timeपुस ८, २०७८
नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सेयर सूचीकृत भएको छ । नेप्सेमा बिहीबार कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेकोसहित ६ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको ९० लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित स्थानीय...
नेप्सेमा आज चार कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन access_timeपुस ७, २०७८
नेपाल स्टक स्क्स्चेन्ज एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा चार कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले बुधबार एनएमबी बैंकको १२ दशमलव ५० प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको तीन दशमलव ५० प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको २७ प्रतिशत र गणपति लघुवित्तको १९ प्रतिशत बोनस सेयरपछिको मूल्य समायोजन गरेक...
सेयर बजारमा आयात रोक्ने प्रयासको प्रभाव, ५६ अंकको सुधार access_timeपुस ६, २०७८
आज मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ५६ अंकले बढेको छ । पछिल्लो समय निरन्तर घट्दै आएको सेयर बजारमा आज उच्च वृद्धि आएको हो । आज २३ सय ६० अंकबाट सुरु भएको परिसूचक उक्त अंकको वृद्धिसँगै २४ सय १५ अंकमा पुगेर रोकिएको छ । खासगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबा...
साताको नेप्से– परिसूचक ७३ अंकले घट्दा लगानीकर्ताको एक खर्ब गुम्यो access_timeपुस ३, २०७८
यो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ७३ अंकले घटेको छ । आइतबारदेखि बिहीबारसम्मको पाँच कारोबार दिनमा नेप्से सूचकमा उक्त अंकको गिरावट आएको हो । साताको पहिलो दिन आइतबार २४ सय ४९ अंकबाट सुरु भएको कारोबार बिहीबारसम्ममा घटेर २३ सय ७६ अंकमा आइपुगेको छ । सातामा का...
पाँच प्रतिशतले बढ्यो नेप्से, ४० मिनेटलाई कारोबार बन्द access_timeमंसिर २८, २०७८
हिजोसम्मको उच्च गिरावटलाई अन्त्य गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) आज एकै दिन पाँच प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार सुरु भएको दुई घन्टा नपुग्दै परिसूचक पाँच प्रतिशतले बढेको हो । उक्त बृद्धिसँगै नेप्सेको कारोबार ४० मिनेटलाई रोकिएको छ । आज कारोबार खुलेको डेढ घण्टामै नेप्से प...
एक सय अंक ओरालो लागेको नेप्से अन्तिममा सम्हालियो access_timeमंसिर २७, २०७८
१०१ अंकले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक अन्तिममा सम्हालिएको छ । साढे २ घन्टापछि अर्थात साढे १ बजे नेप्सेमा १०१ अंकको गिरावट आएको थियो । त्यसपछि, परिसूचक केही सम्हालिँदै ७९ अंकमा आएर रोकिएको हो । उक्त अंकको गिरावटसँगै परिसूचक २२ सय ८२ अंकमा आइपुगेक...
सेयर बजारमा १०० अंकको पहिरो access_timeमंसिर २७, २०७८
साताको दोस्रो दिन आज सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक सय अंकको गिरावट आएको छ । दिउँसो साढे १ सम्ममा बजारमा एक सय अंकको गिरावट आएको हो । ४.२० प्रतिशतको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक २२ सय ६६ अंकमा आइपुगेको छ । यसक्रममा अहिलेसम्म २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराब...
नेप्सेमा एक्कल अंकको गिरावट, कारोबार दुई अर्ब ६७ करोड मात्रै access_timeमंसिर २३, २०७८
साताको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् बिहीबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एक्कल अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक थप ५.८४ अंकले घट्दै २४ सय ४९.९७ विन्दुमा झर्न पुगेको हो । गत बुधबार नेप्से अधिकतम ७३ अंकले घटेको थियो । नेप्सेका अनुसार य...
७२ अंक घटेर बन्द भयो नेप्से access_timeमंसिर १९, २०७८
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ७२ अंकले घटेर बन्द भएको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा ठूलो अंकको गिरावट आएको हो । कारोबार सुरू भएदेखि नै ओरालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक आज समग्रमा २.९० प्रतिशतले घट्यो । यसक्रममा चार अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरका ८९...